Alexis Sanchez oo qalliin ku maray Magaalada Barcelona & Kooxda Inter Milan oo bayaan ka soo saartay – Gool FM
(Barcelona) 17 Okt 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Alexis Sanchez ayaa qalliin guuleystay looga sameeyey canqowga.
Xiddiga xulka qaranka Chile ayaa amaah ku qaadanaya kooxda ka dheesha horyaalka Serie A kaddib markii uu ka soo dhaqaaqay Manchester United, waxaana soo gaaray dhaawac canqowga ah Talaadadii intii uu ku guda jiray waajibaadka qarankiisa.
Kooxdiisa Inter Milan ayaa xaqiijisay in 30 sano jirkaan uu u saftay Magaalada Barcelona, isla markaana qalliin looga sameeyey canqowga bidix gelinkii dambe ee shalay oo Arbaco ahayd.
Bayaan ka soo baxay kooxda Inter oo lagu daabacay website-kooda rasmiga ah ayaa u dhignaa: “Alexis Sanchez waxa uu ku sugnaa saakay Magaalada Barcelona si uu ula tashado Dr Ramon Cugat.
“Booqashadu waxay xaqiijisay ogaanshaha shaqaalaha caafimaadka ee Inter inay go’aansadeen in lagu sameeyo qalliin canqowga bidix ah.
“Qalliinka waxaa la qabtay galabnimadii (shalay), wuxuuna u dhacday sidii loo qorsheeyay.”
Kooxda Inter Milan ma aysan sheegin waqti cayiman oo soo kabsashada Sanchez ah, laakiin warbixinnada laga helayo Talyaaniga ayaa soo jeedinaya inay qaadan karto 12 isbuuc.
Sanchez ayaa hal xilli ciyaareed oo amaah ah ugu soo biiray Inter Milan bishii Agoosto kaddib markii uu ku guuldarreystay inuu bandhig wacan ka sameeyo garoonka Old Trafford, waxaana uu u dhaliyey hal gool afar kulan oo uu u saftay kooxda reer Talyaani.
Goolkiisa kaliya ee uu u dhaliyey Inter Milan waxa uu yimid kulankii ay 3-1 ku garaaceen Sampdoria bishii hore, ka hor inta aan la tusin laacibkan kaarka cas markii ay isku raaceen labo kaar oo kuwa digniinta ah.